Ronaldo Luis Nazario de Lima Ụmụaka Akụkọ Plus Na-enweghị Ntụle
Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Ronaldo Luis Nazario de Lima Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Legend Football which best known by the nickname; 'Fenomeno'.
Ụdị anyị nke Ronaldo Luis Nazario de Lima's Biography Fact gbakwunyere akụkọ nwata ya na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ka anyị bido.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Nwatakiri Akụkọ -Nmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Ronaldo Luis Nazario de Lima mụrụ na 18th nke Septemba 1976 na Rio de Janeiro, Brazil site n'aka nna ya, Nelio Nazario de Lima, Snr na nne ya, Sonia dos Santos Barata. Ọ bụ nwa nke atọ nke di na nwunye ahụ.
Ronaldo Luis Nazario de Lima si n'ezinụlọ dara ogbenye bụ ndị gbalịsiri ike iziga ya ụlọ akwụkwọ. A ghọtara ya dị ka nwata na-eme ihe n'afọ ọ na-eto eto karịsịa na mpaghara agụmakwụkwọ.
Ọganihu ya na arụmọrụ ya dị mma n'ụlọ akwụkwọ ruru njedebe ya ruo mgbe ọ dị afọ 11 mgbe ihe a na-atụghị anya ya mere.
Ronaldo Luis Nazario de Lima nne na nna, Nélio Nazário de Lima na Sônia dos Santos Barata, kewara wee gaa ụzọ ha dị iche iche mgbe ọ dị nanị afọ 11. N'ịbụ ndị na-enweghị onye na-elekọta ya, Ronaldo Luis Nazario de Lima aghaghị ịkwụsị akwụkwọ.
Dị ka n'oge ahụ, naanị otu ụzọ isi nweta obere ego bụ igwu asọmpi bọọlụ n'okporo ámá. Ọ hụrụ ịhụnanya na football n'ọchịchọ ịlanarị.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ndụ Ezinụlọ:
Ndụ mmekọrịta Ronaldo Luis Nazario de Lima pụtara n'ihu ọha n'afọ 1997 mgbe ọ zutere onye nlereanya Brazil na onye na-eme ihe nkiri Susana Werner Onye ọ masịrị site na opera telivishọn telivishọn Brazil a na-akpọ 'Malhacao'.
Mmekọrịta Ronaldo na Susana Werner.
A kwadoro arịrịọ ya ka e gosipụta ya na ngosipụta atọ. Ha abụọ nwere ịhụnanya mgbe ha zutere. Nke a kpalitere mmekọrịta dị ogologo oge nke dịgidere ruo mmalite nke 1999.
Nkwụsị nke otu mmekọrịta pụtara mmalite nke ọzọ maka onye na-eti ihe bụ onye hụrụ onwe ya n'elu ndepụta ndị nwoke ọ bụla nke ụmụ nwanyị chọrọ.
Mgbe afọ ahụ gasịrị, Ronaldo hụrụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ Brazil bụ Milene Domingues n'anya.
Mmekọrịta Ronaldo na Milene Domingues.
O weghị oge tupu ọ tụrụ ime. Mgbe ọ hụrụ na ọ dị ime, Ronaldo kpọọrọ ya gaa n'ihu.
Ha abụọ lụrụ na Eprel 1999. Na 6th nke Eprel 1999, Milene mụrụ nwa mbụ Ronaldo, Ronald na Milan.
Ronaldo na Milene, na-anabata nwa ha.
Alụmdi na nwunye ha nọrọ afọ 4 mgbe nke ahụ gasịrị, ha kewara. Na 2005, Ronaldo tinyere aka na ihe nlereanya Brazil na MTV Star Daniela Cicarelli bụ onye tụụrụ ime mana ọ nwere ime ọpụpụ.
Ronaldo na Daniela.
Mkpakọrịta ha dị mkpụmkpụ. Ọ nọrọ naanị ọnwa atọ ka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ha dara oke ọnụ nke na-efu ihe ruru £ 700,000.
N'otu afọ ahụ 2005, Ronaldo mere ule nna ma gosipụta onwe ya ịbụ nna nwa nwoke aha ya bụ Alexander.
Ronaldo na Alexandra.
A mụrụ nwa ahụ mgbe mmekọrịta dị mkpirikpi n'etiti Ronaldo na Michele Umezu, onye nlekọta Brazil nke Ronaldo zutere na Tokyo, na 2002.
Ronaldo na Michele.
Scandal: Na April 2008, Ronaldo tinyere aka na mkparị nke metụtara atọ travesti ndị akwụna bụ ndị ọ zutere n'otu ụlọ nkwakọba ihe dị n'obodo ahụ Rio de Janeiro.
Mgbe ọ chọpụtara na ha bụ nwoke, iwu nyere ha $ 600 ka ha pụọ. Otu n'ime mmadụ atọ ahụ, onye nwụrụ ugbu a Andréia Albertini rịọrọ $ 30,000. O mechara kpughere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ahụ okwu ahụ.
A kagburu alụmdi na nwunye ya na Maria Beatriz ozugbo nsogbu ahụ gasịrị. Mgbe ha nwesịrị nkọwa doro anya banyere nsogbu ahụ, mmekọrịta ha maliteghachiri. Oge a, ịhụnanya riri ha.
Ronaldo na Maria.
Ọ na-aga n'ihu n'ihu ọha ma mee ka ụwa dum mara na ọ ga-achọ ọzọ.
Ronaldo na Maria (Lovehụnanya nke ndụ ya).
Na 24th nke December 2008, Maria Beatriz Antony mụrụ nwa ha nwanyị mbụ, Maria Sophia, na Rio de Janeiro.
Na April 2009, ezinụlọ ahụ dum kwagara ọhụrụ ụlọ ụlọ na São Paulo. Na 6 Eprel 2010, Maria Beatriz Antony mụrụ nwa ha nke abụọ, Maria Alice na São Paulo.
N’atughi anya, amuru Maria Alice n’otu ubochi, kpomkwem ka iri rutele nwanne ya nwoke nke bu Ronald.
Mgbe nkwenye nke nwa ya nke anọ, Ronaldo kwuru na 6 December 2010 na ya nwere vasectomy, "imechi ụlọ ọrụ mmepụta ihe", na-eche na inwe ụmụ anọ zuru oke.
Ronaldo Nazario de Lima na Ezinụlọ.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Mmekọrịta ya na Nwa Mbụ, Ronald:
Ha bụ ezigbo ndị enyi. O nweghi ihe edoghi anya banyere ịbụ nwoke ha. Enweghi mmetụta dị iche iche n'etiti Ronaldo (nna) na Ronald (Nwa).
Dị ka Nna Dị ka Nwa- Ronaldo na Ronald.
Ronald na-enweta ọtụtụ ihe site na papa ya karịsịa n'ime usoro nke inye, nurturing na nduzi.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Biography Eziokwu-Mmalite nke Bọọlụ:
Obere oge otu ọnwa 6 mgbe ọ gara football, Ronaldo Luis Nazario de Lima ghọrọ onye na-esochi egwuregwu egwuregwu bọọlụ niile ahaziri na mpaghara ya.
Ọ natara nkwado zuru oke site n'aka ndị enyi ya na ndị agbata obi ya maara ọnọdụ ya ma chọọ ka ọ nwee ọganihu ngwa ngwa.
Mmalite mmalite a na bọọlụ malitere n'okporo ụzọ Bento Ribeiro, nke dị na Rio De Janeiro. Ọ bụkwa ebe ọmarịcha ịrị elu nke bọọlụ ụwa malitere.
Ronaldo jiri ohere niile enyere ya gosipụta ikike ịgbawara n'okporo ámá n'ọhịa. Ọrụ siri ike ọ kwụrụ dị ka onye akụkọ akụkọ Brazil bụ Jairzinho hụrụ ya n'oge ahụ bụ onye nchịkwa bọọlụ na scout.
Mgbe Jairzino na-agba akaebe banyere ikike ya, ọ tụrụ aro ka onye dị afọ 16 dị na klọb mbụ ya Cruzeiro.
N'oge mbụ ya na klọb, Ronaldo mebiri ndekọ site na ịtụle ihe mgbaru ọsọ 44 dị ịtụnanya na egwuregwu 44. Ọganihu ya na-agbawa agbawa, nhazi ahụ dị ike yana njikwa njikwa yana usoro mere ka ndị egwuregwu bọọlụ niile nwee mmasị.
Nrụ ọrụ ya gara n'ihu nyeere ọgbakọ ahụ aka iru asọmpi iko Brazil mbụ ya na 1993.
N'oge ụfọdụ, onye ọ bụla malitere ịkpọ ya 'New Pele' ekele maka usoro egwuregwu ya nke yiri nke Pele mgbe ọ malitere n'otu oge ahụ na 1958.
O teghị aka tupu Ronaldo enweta nnukwu nnabata mba mgbe ọ dị afọ 17.
Moreso, ọrụ ya nyere ya tiketi 1994 ụwa iko nke e mere na United States. Ọ bụ ezie na ọ na-ele asọmpi si bench ka ndị obodo ya meriri iko ahụ.
N'oge na-adịghị anya, okwu banyere nnukwu onyinye Ronaldo gbasara ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri Europe n'ihi ntinye ya na ndị otu mmeri Brazil World Cup na 1994.
Onye nnukwu Piet De Visser mechara gụọ ya, bụ onye a na-ahụta dị ka otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu kachasị mma na bọọlụ na-egwupụtala onye otu Ronaldo si Romário.
Omume ya na ọkwa mpaghara mere ka ọ nyefee PSV Eindhoven mgbe iko ụwa gasịrị.
Ronaldo nakweere n'ihi na ọ bụ ọdịnala maka ndị egwuregwu si Brazil na-aga Holland ma ọ bụ France iji mụta egwuregwu European tupu ha agafee.
Ronaldo gbara ala mgbe agbare nkwekọrịta ya na PSV Eindhoven na Netherlands na 1994, na -elekọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ kwa egwuregwu megide asọmpi kachasị elu nke Europe. O jiri oge abụọ mee ihe na PSV Eindhoven ihe mgbaru ọsọ 54 na egwuregwu 57.
Ronaldo Luis Nazario de Lima-Afọ a na-echefu echefu 1996:
Ọ bụ n'oge okpomọkụ nke 1996. Otu afọ ebe ọtụtụ ihe mere. Otu afọ Michael Johnson nwetara ọla edo abụọ n'egwuregwu Olympic nke Atlanta.
Otu afọ England anabatala ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ruo n'ikpeazụ nke asọmpi European.
Otu afọ e wepụtara nsogbu ise a na - akpọ The Spice Girls na - agwa anyị ihe ha chọrọ, ihe ha chọrọ n’ezie. Otu afọ Hotmail ka mepụtara. Otu afọ ndị Fugees ji egwu ahụ gbuo anyị nwayọ.
Nke a bụ afọ Nelson Mandela kwụsịrị n'ọchịchị dị ka praịm minista nke South Africa. Otu afọ Prince Charles na Princess Diana na-edebanye akwụkwọ alụkwaghịm.
Karịsịa, Ọ bụ otu afọ aha Ronaldo Luis Nazario de Lima ghọrọ aha ezinụlọ nke dọtara uche zuru ụwa ọnụ.
Nke a bụ afọ Barcelona napụrụ nwatakịrị dị afọ 19 goofy (Ronaldo Luis Nazario de Lima) site na PSV Eindhoven onye nwere ike ịme ihe mgbaru ọsọ maka ntụrụndụ.
Ọ bụ n'oge a ka Sir Bobby Robson na Jose Mourinho soro Ronaldo rụọ ọrụ dịka onye njikwa na onye njikwa aka na Barcelona.
Gị Ronaldo ga - anọ naanị na Barcelona maka otu oge mana ọ nwere mmetụta na - egosi n'oge ya na klọb.
Ronaldo duru ọgbakọ ahụ na UEFA Cup Winners Cup na Copa del Rey ebube.
Ọ bụ ezie na ọ ga-anọnyere Barcelona naanị otu oge na-enwe mmetụta na-egosi oge ya na klọb.
O meriri ihe mgbaru ọsọ 47 na egwuregwu 49 wee bụrụ onye ọkpụkpọ kachasị nta ka ọ merie FIFA ọkpụkpọ ụwa nke onyinye afọ ahụ, ndekọ nke na-adịbeghị.
Na 20 afọ, Ronaldo gosipụtara ụkpụrụ nke ịkwụsị ụwa nke ọ hụtụbeghị.
N'okwu ya ... "Achọrọ m ịchọta ihe mgbaru ọsọ mgbe m gafechara ndị niile na-agbachitere ya nakwa onye na-elekọta ya. Nke a abụghị ọkachamara m, kama ọ bụ àgwà m. " - Ronaldo.
Ronaldo Luis Nazario de Lima The Inter Milan Akụkọ:
Ego amalitela ikwu okwu na bọlbụ n'afọ 1998. N'afọ ahụ, Barcelona nabatara akwụkwọ ndekọ ụwa nke then 18 nde site na Inter Milan maka Ronaldo.
Ọ dịghị onye ọ bụla lara azụ na ihe ịma aka, Ronaldo kwagara ndị dike Italiantali. Oge nke izizi ya bụ ihe nke ụwa tụwara anya site na ọkpụkpọ kpakpando ya - ihe mgbaru ọsọ 34 gbasoro, na ndekọ ndị ọzọ agbajiri.
Ronaldo ghọrọ onye mbụ ọ ga - eme ka ọ laghachi azụ FIFA World Player nke Awards Year, mgbe ọ na - agụkwa Ballon D'.
Ronaldo Luis Nazario de Lima 1998 Iko Mbaụwa:
Ruo ngwụcha iko ụwa, nke akpọrọ na 1998 n'etiti Brazil na France enweghị ike ịde ederede ka mma.
Mgbe Brazil nọ na-achọ ịgbachitere okpueze ha meriri na 1994, France na-egwu egwu n'ụlọ, na-achọ iji merie Golden trophy maka oge mbụ.
The egwuregwu hụkwara abụọ akụkọ ifo na-na onye ọ bụla ọzọ, na Zidine Zidane na-ekpuchi ndị Brazil Ronaldo, onye onwe ya tinyere onwe ya na esemokwu dị egwu nke mere ka ndị Fans niile nwee mgbagwoju anya.
Tụlee nke a- Ronaldo, nwa okorobịa ọlaedo nke Brazil, bụ onye a na-atụ anya ka ọ na-edu n'akụkụ megide France nke na-alaghachi azụ dara ọrịa naanị awa ole na ole tupu egwuregwu ahụ.
N'oge na-adịghị anya, akụkọ ndị a mere ka akụkọ ọhụrụ dị na onye na-eti ihe na-arịa ọrịa afọ. Emeghere ọtụtụ ihe ngọpụ, sitere na nsị nri ruo nsogbu onwe onye na ndụ ịhụnanya ya.
N'ikpeazụ, onye dọkịta otu egwuregwu Brazil bụ Lidio Toledo kpughere eziokwu na-agbawa obi: A gbagara Ronaldo n'ụlọ ọgwụ mgbe ọ nwụsịrị ụra n'ụra ya n'abalị ahụ tupu agba ikpeazụ.
E si n'ụgbọ mbụ ahụ dọrọ ya ma kpụga ya n'ụlọ ọgwụ nanị iji mee ka ọ laghachi azụ na minit ole na ole tupu ya agaa.
Agbanyeghị, enwere mgbanwe ọzọ na akụkọ ahụ. Kama iji obi ike na-eduga Brazil n'ebube iko mba ụwa, Ronaldo enweghị ike iwepụ ọrịa ya na arụmọrụ dị ala nke onye ọkpọ ahụ nyere ohere ụfọdụ. Zidine Zidane ọkpụ goolu abụọ butere France na mmeri a ma ama meriri Brazil 3-0.
"Anyị furu efu World cup ma m meriri iko ọzọ - ndụ m" - Ronaldo (banyere 1998 World Cup Final).
Ronaldo Luis Nazario de Lima Biography - Akụkọ nhụjuanya ahụ:
Ọtụtụ ndị nwere nnukwu bọọlụ enwere mmerụ ahụ na-eyi egwu egwu. Michael Owen, onye a na-atụ egwu maka ọsọ ọsọ ya, chere ihu otu mmerụ ahụ dị ka Ronaldo ma ọ nweghị ike ịlaghachi bụrụ ọkara onye ọkpụkpọ egwuregwu ọ dịbu.
Paul Gascoigne, Osisi Tiger, Joe Cole, Gary Neville na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme egwuregwu enwewo mmerụ ahụ na-agwụcha ọrụ na enweghị ike ịlaghachi n'ụdị ha kacha mma.
Enwere eriri dị warara nke na-ekewa nnukwu, site na ndị ọzọ. O doro anya na ọ bụ ọrụ siri ike ịghọ ihe kacha mma.
Kedu ihe siri ike? Iji bụrụ nke kachasị mma, daa, dee ede ma bilie ka ị bụrụ nke kachasị mma. Nke a bụ Ronaldo Luis Nazario de Lima mmerụ ahụ.
Ụwa 1998 NA-EBU EBE EBE EBE EBE EBE-O merụrụ ahụ n'ọgbagha ya na onye na-elekọta French, Barthez na 1998 ụwa cup.
O mechara bọọ ọbọ na Barthez, bụ onye ya na ya merụrụ ahụ na 98 ụwa nke ikpeazụ, nke nwere mgbagwoju anya na Manchester United, bụ nke mere ka ọ bụrụ na o siri na Old Trafford guzosie ike.
NKE 1999 / 2000 MGBE NA-EBU- Na Nọvemba 21st 1999, ọdachi dakwasịrị ọzọ, dịka Ronaldo gbawara akwara ikpere mgbe ọ na-egwu na nsogbu Serie A megide Lecce.
Mgbe ịwa ahụ na ọnwa 5 nke mgbatị, onye Brazil laghachiri na Coppa Italia nke ikpeazụ megide Lazio.
A tụbọrọ olileanya nke nlọghachi azụ nke akụkọ mgbe ọ tara ahụhụ nke abụọ, merụọ oke mmerụ ahụ n'otu ikpere mgbe naanị 7 nkeji na ubi. Ọ na-ebupụ ya site n’ihe ndina.
Ọ gaghi egwu ọzọ ruo mgbe njedebe nke 2001 / 2002 oge. Site n'ikwu ya, ọ na-apụ maka otu afọ. Naanị ya pụtara maka egwuregwu iri na isii ma jide nanị 7 ihe mgbaru ọsọ maka Inter n'oge ahụ.
Ronaldo Luis Nazario de Lima - Post Inter Milan Oge:
Mgbe ọ gbakere, Ronaldo mere mgbalị zuru ezu iji mee ka onye njikwa Brazil bụ Luiz Felipe Scolari kwenye ịgụnye ya na ndị otu ya maka 2002 World Cup na Japan / Korea.
N'ịbụ onye megharịrị egwuregwu ya iji dochie ịdabere na ọsọ na agility, Ronaldo bụ onye ọkpụkpọ dị iche na oge ọ merụrụ ahụ. Ọ dabere na ike na anya dị mma maka ihe mgbaru ọsọ.
Nke a ka o nwetara site na ahuhu. O kpughere ụdị egwu ọhụụ ya ka ọ bụrụ ihe na-emebi ihe - na-eduga Brazil na nke ikpeazụ na ọgụ na Germany. Okwu egwuregwu niile a na-ekwu na Ronaldo meriri ndị mmụọ ọjọọ ya site na 1998 - ma merie ha ka o mere.
Onye Brazil kpughere ụdị ọhụụ ọhụụ ya na 2002 ụwa iko maka nsonaazụ na-agbawa obi ebe ọ duziri Brazil gaa na njedebe nke ụwa ọzọ wee merie ihe mgbaru ọsọ 2
O nyere goolu asatọ n’egwuregwu ahụ wee merie MVP. O meriri Fifa onye na-egwu egwu ụwa na Laureus laghachiri n'afọ ahụ n'afọ ahụ.
Omume ya mere ka ọ nweta ego ọzọ na-enyefe n'ụwa, oge a € 39 nde, dị ka Real Madrid gbakwunyere ya na usoro ha na-eto eto nke Galacticos.
Agbanyeghị na ịnọ n'akụkụ ruo etiti Ọktọba, ndị egwuregwu Real Madrid nabatara Ronaldo na ndị dike - na-akpọ aha ya na egwuregwu ọ na-abịaghị ma na-agbasa ndekọ maka ire ere.
N'ịme ihe ọ na-emekarị nke ọma, Ronaldo kelere ndị agbụrụ ahụ site na iji ihe mgbaru ọsọ 2 na mmalite ya. Ọ gara n'ihu itinye ihe mgbaru ọsọ 30 n'ụzọ iji merie La Liga na Madrid.
N'agbanyeghi otutu mmerụ ahụ, Ronaldo ga-aga n'ihu na-atụle 104 ihe mgbaru ọsọ na 184 egwuregwu Madrid maka oge 5 na ụlọ.
Post Madrid Era (Nsogbu Ọrịa na Nlaghachi):
Ronaldo enweghị isi na njikwa Madrid Fabio Capello na 2006, na ịgbaso ntinye aka nke Ruud Van Nistelrooy si Manchester United, ụbọchị ya na Bernabeu gụrụ.
Na January 27th 2007, Ronaldo bịanyere aka n'akwụkwọ maka AC Milan na azụmahịa ruru nde 7.5.
Na February 13th 2008, na otu egwuregwu na Livorno, Ronaldo kwụsịrị n'ọhịa mgbe ọ nụsịrị nịịktị kneecap ka ọ gbasasịrị mgbe ọ gbalịsịrị iji merie bọl ahụ.
Ọ bụ oge nke atọ Ronaldo tara ahụhụ dị otú ahụ, ọbụnadị ọmarịcha ụlọ ahịa a na-akpọ Milan Fitness Label nwere olileanya siri ike maka ya mgbe ọ na - agbapụta - Milan adịghị emegharị nkwekọrịta ya na njedebe nke oge ọ bụla n'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ 8 dị na egwuregwu 20.
Dị ka Ronaldo si kwuo, "Ndụ m anọgidewo na-abụ ọtụtụ ihe ịma aka na m kwadebere n'ụzọ mmetụta uche, ma nke a bụ ihe ịma aka kasịnụ nke ndụ m." - Ronaldo
N'ime ihe karịrị otu afọ, Ronaldo kwere nkwa igosi na onye ọ bụla na-ezighị ezi ma si n'ọrụ nke atọ ya na-emerụ ahụ. Nlọghachi n'ala nna ya hụrụ akara ngosi nnukwu ama maka ndị Kọrịnt, bụ ebe o nwetara ndị dike nabatara ya.
N'agbanyeghị na ọ nọrọla ọnwa iri na atọ, Ronaldo nyeere onwe ya aka iji goolu 13 na 30 pụta, na-enyere ndị otu ya aka ka ha nwee asọmpi na iko okpukpu abụọ.
Enwekwara oku ọhụụ ka eweghachite ya na ndị otu Brazil ọzọ maka iko mba ụwa nke 2010. Nke a agafeghị.
Ronaldo Luis Nazario de Lima - Ijikwa iko ikpeazụ nke ụwa:
Ronaldo na-egwuri egwu na iko ụwa 2006 n'agbanyeghị na enwere obi abụọ na a na-ebuli ya ike na ibu ya. O mebiri ihe ndekọ Gerd Muller wee bụrụ ihe niile na-ebute ihe egwuregwu ụwa na 15.
O mezuru nke a, site na iji akara akara ụgha megide Ghana na June 27th, na-ejide ihe mgbaru ọsọ 15th ya na asọmpi World Cup. Brazil ga-aga n'ihu ka France kpochapụ ya na nkeji iri na ise.
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ibu Nsogbu:
Ronaldo gbalịsiri ike inweta oke oke na njedebe nke ọrụ ya.
Nyocha ahụike gosipụtara na ya nwere hypothyroidism - ọrịa na-emetụta metabolism nke ahụ.
Dị ka Ronaldo si kwuo, “Mgbe m nyochara ahụike, achọpụtara m na m nwere mkpesa a na-akpọ hypothyroidism.
Ọ na-eme ka m gbadaa ngwa ngwa ma chịkwaa ya, m ga-ewere ụfọdụ homonụ a na-anaghị ekwe ka agba bọọlụ n'ihi mgbochi mgbochi (iwu). M na-atụ ụjọ na ọrụ m eruola ọgwụgwụ ya. ”
Ronaldo kwere ndị Fans nkwa na ha ga-agbasi mgba ike. Gị, Ọ dịghị enye ha mmesi obi ike ọ bụla. N'oge ụfọdụ, ọ bịara onye ọ bụla na olileanya niile efunahụ mgbe ọ gbalịsịrị ọtụtụ ọgụ.
Ọ naghị arụsi ọrụ ike iji nwetaghachi ọdịdị ọzọ.
Ronaldo Luis Nazario de Lima ezumike nká:
Onye FIFA FIFA oge atọ nke afọ Ronaldo kwupụtara ezumike nká ya na football n'otu ụbọchị Mọnde na ihe a na-akpọ mkparịta ụka mkparịta ụka nke na-eweta njedebe ọrụ 18 ya. Ronaldo mechara kwupụta ezumike nká ya na February 2011.
Dabere na Ronaldo-
"Ọrụ m mara mma ma dị ebube. Enweela m ọtụtụ mmeri ma mmeri na-enweghị ngwụcha. O siri ezigbo ike ịhapụ ihe mere m ji nwee obi ụtọ.
Ebum n'uche, achọrọ m ịga n'ihu, mana m ga-ekweta na m furu efu agha ahụ ahụ m. ”
Ronaldo Luis Nazario de Lima unwa na-ezighi ezi (Iji ya tụnyere Cristiano Ronaldo):
Ihe mbụ na-abata anyị n’uche ma mmadụ kpọọ aha Ronaldo bụ Cristiano Ronaldo, Cr7 ma ọ bụ Cr9.
A na-akpọkarị Luis Nazario De Lima Ronaldo dị ka, 'Fat Ronaldo', 'fat (fat) Ronaldo', 'Mottai (bald) Ronaldo', 'Akpụkpọ ụkwụ ntutu osisi' rolando ',' Ronaldo nke ọzọ '.
Ọtụtụ ndị Fans nke Ronaldo de Lima nwere obi mgbawa mgbe mmadụ dị ukwuu dị ka ya gbadata na ọkwa dị ala dị otu a ma echetaghị ya maka ihe ọ rụzuru, kama maka etu ọ dị ma ọ bụ ntutu isi ya.
Nke a bụ otu n'ime ihe kpatara LifeBogger ji kpebie iwepụta oge wee dee banyere onye ọkpụkpọ egwu nke nwere ike bụrụ nnukwu mkpali maka ndị na-agba ụkwụ.
Ugbu a anyị na-ajụ gị, ị ga-echeta Ronaldo maka ibu ya, ka ọ bụ maka etu o siri gbata goolu? Ga-echeta ya maka ihe o mere ntutu isi ya ma ọ bụ ihe o nwere ike iji ụkwụ ya mee?
Oge ọzọ onye mmadụ na - ekwu Ronaldo, ị ga - eche banyere onye gọọmenti Portuguese nke meriri onye mmeri FIFA n'ụwa ma ọ bụ Brazil nke meriri ya ugboro atọ? "Wepụ okwu gị n'okpuru na nke a mgbe ị gụsịrị isiokwu a".
Ronaldo Luis Nazario de Lima Biography Nkọwa ọkwa:
N'ịbụ onye edere n'oge gara aga ugboro atọ na ọrụ ya, ị maara ugbu a na ọ na-atọ ya ụtọ igosi na ndị nwere obi abụọ adịghị mma.
Na Ronaldo, anyị nwere onye ọkpụkpọ egwu nke a manyere ka ọ gbanwee egwuregwu ya ugboro atọ ka ọ merụrụ ahụ maka ngụkọta nke ihe karịrị ọnwa 36. Nke a bụ ihe anyị chere banyere ya na ọkwa anyị n'okpuru.
Onye kacha egbu ihe n'ụwa emepụtabeghị. Onye Brasilian na -eji bọọlụ arụ ọrụ ebube.
Ronaldo da lima for. Maka m naanị Ronaldo para siempre⚽️
Cr9 bụ nnukwu ụkwụ. Ị ga-enwerịrị ngwa ngwa a ma anyị nwere obi ụtọ na ya
Nke ahụ dị egwu. Enwere m obi ụtọ ịgụ akụkọ gị. Ronaldo ka bụ dike. Daalụ ịkọrọ ya akụkọ.
Igwe Iphone 5C rụgharịrị ọhụrụ
Ụzọ gị nke ịkọ ihe nile na ibe a bụ n'ezie ihe siri ike, ihe niile nwere ike
nke dị mfe ịmara ya, Na-ekele ọtụtụ.
Ụmụaka Hirving Lozano Story Plus Na-emeghe Ihe Ndị Na-eme Ememe